एक चक्की जसले तपाईको जवानी फर्काउछ ! - inaruwaonline.com
एक चक्की जसले तपाईको जवानी फर्काउछ !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ ०२, २०७३ समय: ४:५२:५७
एजेन्सी । यदि कसैलाई एक चक्की औषधी खाएर अहिलेको उमेर भन्दा २० वर्ष जवान हुन सकिन्छ भने त्यो असत्य वा बकास लाग्न सक्छ । तर अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार वैज्ञानिकहरु एक यस्तो औषधि बनाएका छन् । जसको सेवनले तपाईको शरिर र दिमागमा आश्चर्यजनक परिवर्तन ल्याउने छ र आफ्नो उमेर भन्दा २० बर्ष जवान अनुभव गर्नुहुनेछ ।
बेलायती अनलाइन मडिया रिपोर्टका अनुसार सो चक्की को नाम डीएचईए रहेको छ । यसमा डाइहायड्रोइपी एन्ड्रोस्टीरोन रहेको छ । जसको सेवनले मानिसमा आश्चर्यजनक परिवर्तन ल्याउछ । बेलायत बाहेक अमेरिकामा पनि सो चक्की औषधि पसलमा सजिलै पाउन सकिने जनाएको छ ।
उक्त चक्की सेवन गर्न डाक्टरको अनुमति लिन आवश्यक नरहेको बताइएको छ । सो चक्कीको सेवनबाट स्टेमिना र सोचमा पनि सकारात्मक परिवर्तन गराउने छ । डीएचईए चक्कीले हारमोन्सलाई सहयोग पुर्‍याउछ । एड्रीनल ग्लैन्डबाट निस्कने ईस्टरोजेन्स र टेस्टोस्टीरन्स हारमोनमा पनि यसको राम्रो प्रभाव रहनेछ ।
सोको प्रभावमा तपाईको पर्सनालिटी र योवनमा निखार ल्याउछ । जस कारण तपाई आफ्नो उमेर २० बर्ष कम महसुस गर्नुहुनेछ । डीएचईएको मात्रलाई भने मिलाएर लिनुपर्न डाक्टरको सुझाव छ । सोको मात्रालाई मिलाए आखामा नयाँ चमकका साथै कपाल पनि चमकदार बनाउनेछ ।हाम्राकुराबाट